विश्वका सबैभन्दा धनी जेफ बेजोस अन्तरिक्ष पुगेर पृथ्वीमा फर्किए [भिडियो हेर्नुहोस्]
पढ्न लाग्ने समय: 1 minute
काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोस अन्तरिक्ष पुगेर फर्किएका छन् । ब्लू ओरिजिनको नयाँ शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट अन्तरिक्ष सीमा मानीको कर्मान रेखा पार गरेर पृथ्वीमा फर्किएको हो ।
बेजोससँग तीन जना यात्रुहरू थिए, जसमध्ये एक विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्तरिक्ष यात्री र दोस्रो कान्छो अन्तरिक्ष यात्री बन्न सफल भएका छन् । यसका साथ, बेजोस अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने दोस्रो अर्बपति भएका छन् ।
उनी भन्दा पहिले बेलायती व्यवसायी रिचर्ड ब्रान्सन भर्जिन ग्यालेक्टिकमा उडान पूरा गरेर फर्केका थिए । यद्यपि उनले कर्मन रेखा पार गरेका थिएनन् । बेजोस अन्तरिक्षको उचाईमा पुग्ने पहिलो अर्बपति हुन सकेनन्, उनले आफ्नो कम्पनी ब्लू ओरिजिनसँग फरक कथा लेखेका छन् ।
वास्तवमा यस उडानले अन्तरिक्षको ढोका ढकढक्याउने बित्तिकै विशेषज्ञ पायलट वाली फङ्क विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्तरिक्ष यात्री बन्न सफल भएका हुन् । यो मात्र होइन, उनीसँग गएका १८ वर्षीय ओलिभर डामन सबैभन्दा कान्छो अन्तरिक्ष यात्री बन्न पुगेका छन् । नयाँ शेफर्ड रकेट एक सबआर्टिबल उडान हो ।
त्यसले आवाजको गतिको तीन गुण तिव्र गतिमा अन्तरिक्षर्फ आफ्नो कदम बढाएको थियो । यो सिधा अन्तरिक्षमा जान्छ, जब सम्म यसको अधिकांश ईन्धन समाप्त हुँदैन । ५२ वर्ष अघि, नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमाको सतहमा पाइला टेक्ने पहिलो मानव बनेका थिए ।
१६ जुलाईमा, अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा अवस्थित जोन एफ केनेडी स्पेस सेन्टरबाट उडेको नासाको अन्तरिक्ष यान अपोलो–११ चार दिनको यात्रा पूरा गरेर २० जुलाई १९६९ मा चन्द्रमा पुगेको थियो । यो यान २१ घण्टा ३१ मिनेटसम्म चन्द्रमाको सतहमा रहेको थियो । जानकारी अनुसार बेजोसले ५ मिनेसम्म अन्तरिक्षमा बिताउन सफल भएका छन् ।
एउटा कार कम्पनीका मालिकको सम्पत्ति नेपालको बजेटभन्दा ११ गुणा बढि
साउन १ देखि नचल्ने भनिएका ‘अवैध मोबाइल’ हरु कस्ता हुन् ?
टिकटक बन्द हुने
वल्र्डलिंकको इन्टरनेट सेवा संख्या ५ लाख घरधुरीसम्म, डायलअप देखि एफटिटिएच सम्मको यात्रा
तपाइले यी कुरा ध्यान नदिए तपाईको ह्वाट्सएप र फेसबुक अर्काले सहजै खोलिरहेको हुन्छ !
यतिसम्म इज्जत फाल्दा टिकटकबाट कति डलर झर्छ ? [ डलर झार्ने तरिकासहित ]
दुई घण्टापछि एनटिसीमा देखिएको समस्या समाधान–समस्याबारे यसो भन्छ टेलिकम
आज बिहानैदेखि एनटिसीका नम्बरमा फोन नलाग्ने समस्या, कारणबारे बोल्यो टेलिकम
तपाइले थाहा नपाई अरुले फेसबुक खोले थाहा हुने गज्जबको टुल्स, अन्त खुले आफ्नै मोबालबाट लगआउट
फेसबुकमा यस्ता नयाँ विषेशता थप्ने तयारी
चीनको अर्को चमत्कार, नयाँ अन्तरिक्ष स्टेशनमा बस्ने गरी तीन जनालाई पठायो
टिकटकदेखि सावधान !
अब ट्वीटरबाट यसरी कमाउनुहोस् सयौँ डलर